Miira tajaajilummaa hooggantootaa daran cimsuuf leenjiin kennamaa jira
Miira tajaajilummaa hooggantootaa daran cimsuuf leenjiin kennamaa jira Featured
Hooggantoonni hawaasa tajaajiluuf imaanaa fudhatanii hojjetaa jiran faaydaa dhuunfaasaaniif dursa kennuu akka hinqabne Ittigaafatamtuun Waajjira Giddugaleessaa DhDUO ibsan.
Ittigaafatamtittiin Aadde Adaanach Abeebee ibsa Dilbata darbe Gaazexaa Bariisaatiif mooraa Mana Marii Federeeshiniitti kennaniin akka jedhanitti, komii hawaasni hooggantootarratti qabu gadi buusuuf hooggantoonni imaanaa ummata tajajailuuf fudhatan amanamummaan raawwachuu qabu.
Rakkooleen akka naannoo Oromiyaatti ka’an hedduun isaanii hanqina bulchiinsa gaarii sababa godhataniiti kan jedhan Aadde Adaanach, rakkoolee kanneen furuuf hooggantoota sadarkaa naannoo hanga aanaatti leenjiin gahumsaa kennamaa jiraachuus eeraniiru.
Akka ibsa Aadde Adaanachiti leenjiin hooggantootaa sadarkaa naannoorraa hanga aanaatti jiraniif Magaalaa Adaamaatti kennamu kun wiixata darberraa kaasee kan itti jiramu ta'uu ibsanii, leenjichaan booda miirri tajaajilummaarratti mul'ataa ture ni abdatama jedhaniiru.
Sosochii haaromsa gadi fagootiin jijjiiramni tajaajiltummaarratti mul’achaa jiru fooyyee qaba kan jedhan ittigaafatamtittiin, sadarkaa godinaafi aanaaleetti komiin akka jiru eeraniiru.
Kanaan dura hooggantoonni miira tajaajilummaa hinqabne faaydaa mataasaaniif kaka’uusaaniin qabsoon ummataa akka finiinuuf sababa ta’ee turuusaas beeksisaniiru. Rakkoo gama kanaan mul'atu maqsuufis qaamni hooggansarra jiru of kennee hojjechuu akka qabus hubachiisaniiru.
Gama biraatiin DhDUOn gaaffii misoomaafi bulchiinsa gaarii ummataa deebisuuf xiyyeeffannaan hojjetaa akka jiru miseensi Koree Giddogaleessaa dhaabichaafi Bulchaan Godina Harargee Bahaa, Obbo Taarraqany Bulultaa ibsan.
Leenjiin hooggansa olaanaa Godina Harargee Bahaa, Bulchiinsa Dirre Dawaafi Naannoo Hararii Kibxata darbe wayita Magaalaa Hararitti eegalametti akka eeranitti, dhaabbatichi gaaffiilee misoomaafi bulchiinsa gaarii ummanni kaasaa jiruuf deebii sirrii kennuuf hojjetaa jira.
Keessumaa haaromsa gadifagoon as gaaffii ummanni gama misoomaatiin kaasuuf deebii kennuuf tattaaffii taasifameen bu'aa gaariin mul'achaa jiraachuus beeksisaniiru.
Olaantummaa seeraa kabachiisuufi gochaafi yaada sassaabdummaa kiraa ittisuufi gama qabsaa'uutiin hooggansa biraa hanqinni akka mul'atu bulchichi eeraniiru.
Akeekni leenjichaas bu'aalee haaromsichaan booda argaman ittifufsiisuufi hanqinoota mul'ataa jiran sirreessuuf hooggansi tokkummaa ilaalchaafi gochaa akka qabaatu gochuu ta'uus ibsaniiru.
Kanaanis hooggansi gaaffii hojiilee misoomaafi bulchiinsa gaarii ummanni gaafatu deebisuuf eegalaman cimsuuf qindoominaan hojjechuun akka irraa eegamus dubbataniiru.
Ittigaafatamaan Waajjira DhDUO Godina Harargee Bahaa, Obbo Bushraa Aliyyuu gamasaaniitiin leenjicharratti hojiin dhaabbatichi gama bulchiinsa gaarii, nageenyaafi sirna dimokraasiirratti raawwate haala qabatamaa si'anaafi fedhii ummataa wajjin kan nsakattamu ta'uu himaniiru.
Leenjii guyyoota shaniif kennamu kanarratti hooggansi olaanaan 700 kanneen aanaalee 24 godinichaafi bulchiinsa magaalaa, Bulchinsa Dirre Dawaafi Nananoo Harariirraa keessaa babahab hirmaachaa jiraachuun himameera jechuun BOIn gabaaseera.
Torban kana/This_Week 11245
Guyyaa mara/All_Days 1820665